2 Samueri 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 11:1-27
11 Zvino pakutanga kwegore,+ panguva yaienda madzimambo kunorwa,+ Dhavhidhi akatuma Joabhi nevashandi vake vaaiva navo nevaIsraeri vose, kuti vaparadze vanakomana vaAmoni+ uye vakombe Rabha,+ Dhavhidhi paaigara muJerusarema. 2 Panguva yemanheru Dhavhidhi akamuka pamubhedha wake, akafamba-famba pamusoro pedenga reimba+ yamambo; uye ari pamusoro pedenga reimba akaona+ mumwe mukadzi achigeza, uye mukadzi wacho aiva nechitarisiko chakanaka kwazvo.+ 3 Dhavhidhi akabva atumira shoko, akabvunza nezvomukadzi wacho,+ mumwe munhu akati: “Haasi Bhati-shebha+ mwanasikana waEriyamu,+ mudzimai waUriya+ muHiti+ here?” 4 Pashure paizvozvo Dhavhidhi akatumira nhume kuti iye amutore.+ Naizvozvo akapinda maaiva,+ akarara naye,+ paakanga achizvichenesa pakusachena kwake.+ Gare gare iye akadzokera kumba kwake. 5 Zvino mukadzi wacho akava nepamuviri. Naizvozvo akatumira shoko, akaudza Dhavhidhi kuti: “Ndava nepamuviri.” 6 Dhavhidhi akabva atumira shoko kuna Joabhi, achiti: “Nditumire Uriya muHiti.” Naizvozvo Joabhi akatumira Uriya kuna Dhavhidhi. 7 Uriya paakasvika kwaari, Dhavhidhi akabvunza kuti Joabhi akanga akadini uye kuti vanhu vakanga vakadini uye kuti kurwa kwakanga kwakadini. 8 Dhavhidhi akazoti kuna Uriya: “Enda kumba kwako, ugeze tsoka dzako.”+ Naizvozvo Uriya akabuda mumba mamambo, chipo chomutsa chamambo chikamutevera. 9 Zvisinei, Uriya akarara pasuo reimba yamambo nevamwe vashandi vose vashe wake, uye haana kuenda kumba kwake. 10 Naizvozvo vakaudza Dhavhidhi, vachiti: “Uriya haana kuenda kumba kwake.” Dhavhidhi akabva ati kuna Uriya: “Hauna kubva parwendo here? Nei usina kuenda kumba kwako?” 11 Uriya akati kuna Dhavhidhi: “Areka+ nevaIsraeri nevaJudha vari kugara mumatumba, ishe wangu Joabhi nevashandi vashe+ wangu vakadzika musasa pakatarisana nesango, zvino ini—ndingaenda kumba kwangu kuti ndidye, ndinwe uye ndirare nomudzimai wangu here?+ Noupenyu hwenyu uye nomweya wenyu mupenyu,+ handisi kuzoita chinhu ichi!” 12 Dhavhidhi akabva ati kuna Uriya: “Garazve pano nhasi, mangwana ndichakurega uchienda.” Naizvozvo Uriya akagara muJerusarema zuva iroro nezuva raitevera racho. 13 Dhavhidhi akamushevedzazve kuti adye nokunwa pamberi pake. Naizvozvo akamudhakisa.+ Zvisinei, akabuda manheru kuti anorara pamubhedha wake nevashandi vashe wake, uye haana kuenda kumba kwake. 14 Zvino mangwanani Dhavhidhi akanyorera Joabhi tsamba,+ akaitumira noruoko rwaUriya. 15 Naizvozvo akanyora mutsamba yacho, achiti:+ “Isai Uriya pamberi panorwiwa zvakanyanya,+ imi mudzoke shure kwake, iye abayiwe, afe.”+ 16 Zvino Joabhi paakanga achirinda guta, akaita kuti Uriya arambe ari panzvimbo yaaiziva kuti yaiva nevarume vakashinga.+ 17 Varume veguta racho pavakabuda, vakarwisa Joabhi, vamwe vanhu, ivo vashandi vaDhavhidhi vakafa, uye Uriya muHiti akafawo.+ 18 Zvino Joabhi akabva atumira shoko kuti audze Dhavhidhi nyaya dzose dzehondo. 19 Akarayira nhume yacho, achiti: “Paunongopedza kutaurira mambo nezvenyaya dzose dzehondo, 20 kana mambo akashatirwa akati kwauri, ‘Manga muchienderei kunorwa muri pedyo kwazvo neguta racho? Manga musingazivi here kuti vaizopfura vari pamusoro porusvingo? 21 Ndiani akauraya Abhimereki+ mwanakomana waJerubhesheti?+ Haasi mukadzi akakanda huyo pamusoro pake+ ari pamusoro porusvingo zvokuti akafira kuTebhezi here?+ Manga muchienderei pedyo kwazvo norusvingo?’ iwe utiwo, ‘Mushandi wenyu Uriya muHiti afawo.’”+ 22 Naizvozvo nhume yacho yakasvika, ikaudza Dhavhidhi zvose zvayakanga yatumwa naJoabhi. 23 Nhume yacho ikati kuna Dhavhidhi: “Varume vacho vatikunda, zvokuti vabuda kuzotirwisa musango; asi taramba tichivadzingirira kusvikira pasuo regedhi chaipo. 24 Vapfuri varamba vachipfura vashandi venyu vari pamusoro porusvingo,+ zvokuti vamwe vashandi vamambo vafa; nomushandi wenyu Uriya muHiti afawo.”+ 25 Dhavhidhi akabva ati kunhume yacho: “Unoti kuna Joabhi, ‘Nyaya iyi ngairege kukunetsa, nokuti bakatwa rinoparadza+ uyu kana uyo. Rwisa guta racho zvakanyanya uriputse.’+ Iwe umukurudzire.” 26 Zvino mudzimai waUriya akanzwa kuti Uriya murume wake akanga afa, akatanga kuungudza+ pamusoro pomurume wake.+ 27 Nguva yokuchema+ payakanga yapfuura, Dhavhidhi akabva atumira shoko, akamuendesa kumba kwake, akava mudzimai wake.+ Kwapera nguva yakati, akamuberekera mwanakomana, asi chinhu chakanga chaitwa naDhavhidhi chaiva chakaipa+ kuna Jehovha.+
2 Samueri 11